अण्डाको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् अब १ क्रेटको कति पर्छ ? | Wow Sansar – Allindiabc
अण्डाको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् अब १ क्रेटको कति पर्छ ? | Wow Sansar
February 25, 2021 adminLeaveaComment on अण्डाको मूल्य घट्यो, हेर्नुहोस् अब १ क्रेटको कति पर्छ ? | Wow Sansar
काठमाडौँ । सधैँ उतारचढाव भइरहने कुखुराको अण्डाको मूल्य घटेको छ । उत्पादन बढेको र खपत घटेसँगै मूल्यमा गिरावट आएको हो । स्वस्थानी व्रतकथा शुभारम्भ भएसँगै उपभोग घटेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमणसँगै चल्लाको अभावमा हुँदा अण्डा दिने कुखुराको सङ्ख्यामा कमी आएको थियो । पछिल्लो समय नयाँ कुखुरा बढेसँगै उत्पादन बढेपछि मूल्य घटेको नेपाल अण्डा उत्पादक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष शिवराम केसीले जानकारी दिनुभयो ।
अण्डाको मूल्य बढेका बेला बुढा कुखुरा बिक्री नगरेका कारण पनि उत्पादन बढी भएको उहाँको भनाइ छ । सामान्यतया अण्डा दिने कुखुरा एक वर्ष छ महिना पाल्ने गरिन्छ । अण्डाको मूल्य बढ्दा किसानले थप एक वर्षसम्म पाल्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।
मूल्य घटेसँगै कृषक प्रभावित बनेका छन् । सङ्घले माघ २६ गतेदेखि लागू हुने गरी ठूलो अण्डा फार्म दर प्रतिक्रेट (३० वटाको) ३२५ र मध्यम रु ३०० कायम गरेको छ । यसअघि ठूलो अण्डाको दर रु ३६० र मध्यम अण्डाको रु ३४० सम्म पुगेको थियो । केसीले भन्नुभयो, “उत्पादन बढी र खपत घटेकै कारण अण्डाको मूल्य घटेको हो ।”
उपभोक्ताले भने सस्तो मूल्यमा अण्डा उपभोग पाएका छैनन् । उपभोक्ताले भने रु १५ मा अण्डा खरिद गर्न बाध्य छन् । विचौलियाले बढी नाफा खाएर उपभोक्तालाई महङ्गो मूल्यमा बिक्री गरिरहेको पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घले समन्वय गर्न नसक्दा उपभोक्ता ठगिएका छन् ।”
सङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका किसान किरण ओली बजारमा अण्डाको माग भइरहेको भए पनि व्यवसायीको चलखेलका कारण मूल्य घटेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “म सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्दिनभन्दा मसँग एक हजार ५०० पेटी अण्डा थन्किएको छ ।” अहिलेको अवस्थामा सस्तोमा अण्डा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भए पनि व्यवसायीको चलखेललाई केही किसानको सहयोगका कारण समस्या आएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
घाटामा व्यवसाय गर्दा कुखुरा पाल्ने किसान निकै घटेको उहाँको भनाइ छ । दुई हजार ७०० हाराहारी लेयर्स कुखुरा पाल्ने किसान रहेकामा यो सङ्ख्या घटेर एक हजार ७०० मा झरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ओलीले भन्नुभयो, “साना किसान विस्थापित र ठूला स्थापित हुँदैछन् ।” हाल दैनिक देशभरमा ३२ लाख वटा अण्डा उत्पादन हुँदै आएको छ ।
केही महिनाअघिसम्म यो सङ्ख्या २६ लाख हाराहारी रहेको सङ्घले जनाएको छ । नेपालमा कुखुराजन्य क्षेत्रमा रु १ खर्ब २५ अर्ब लगानी भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
“अर्को साल बिहे गर्छु; छुट्टी मिलाएर दुई महिना अघि नै आइज है बुनु” भनेका दाजुको कसरी म,ला,मी जान सकूँ ? महान चेली समिक्षाको रो,द,न (भिडियो सहित) | Wow Sansar
विदेशबाट फर्किएका श्रीमानले आफ्नै २ वर्षीय छोराकी आमालाई जे गरे … | Wow Sansar
हिम्मतवाली सदिच्छालाई मिल्यो ठुलो सफलता। ६ जना जाने भए जेल। अन्तिममा रुदै छाडिन देस हेर्नुहोस भिडियो | Wow Sansar
गुल्मीमा अनौठो घटना ! कम्मर मुनी लुगा नै नभएको अवस्थामा ससुरा मृत भेटिए, बुहारी प्रहरी नियन्त्रणमा (भिडियो हेर्नुस्) | Wow Sansar
गायिका अञ्जु पन्तको बिहे पछी नायिका रीमा विश्वकर्माको दोस्रो विवाह तय, को हुन् हुनेवाला बेहुला ? | Wow Sansar
आज सुनको मूल्य बढ्यो कि घट्यो ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ सुनको मूल्य
…..त्यसपछि उनको त्यो पार्ट हेर्दा डाक्टर परे चकित !
कैला’शमा साक्षत् शिव देख्ने जातिले मनै देखि ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस हुनेछ अदुभूत फलि’फाप
पाथीभरा माताको दर्शन गरि हेर्नुहोस आज मंगलबारको राशिफल
प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालको मु’र्दाघरमा यौ’नध’न्दा